Carbon Fiber Glove Core-Carbon Fiber ESD Gloves-Rudong Sunny Glove Co., Ltd.
Ị nọ ebe a : >lọ>ngwaahịa>Carbon Fiber ESD Gloves
Koodu ： 2305
Nhazi ： S, M, L （nwere ike ịhazi nha ndị ọzọ）
Jụọ ajụjụ Akwukwo nke Bekee
Gịnị bụ ESD / Anti-static Glove
Ngwunye anti-Static (ESD) bụ ngwakọta dị ịrịba ama nke eriri dị larịị na eriri sịntetik. Gbochie ịwepu ihe static na-enye gị otu ụzọ uwe aka na - enyere gị aka ịnọgide na-arụ ọrụ kachasị gị mma.
Gọọmenti Anti-static (ESD) na-ebelata aja na-anakọta ụtụ electrostatic mgbe ị na-eji ihe dịkarịsịrị ala kpọrọ ihe. Ngwunye mgbochi static (ESD) na-arụ ọrụ oge niile, na-ewepu static na-emerụ ahụ. Enweghi ihe nkpa eji wuo oru banyere ibu di uku, inwe ezi uche na uzo na -eme ka ike gwusi ebe oru. Ejiri mkpuchi na mkpịsị aka kpuchie na-enye njigide dị elu, mbufụt na snag. Ngbanye obi uto na ogwugwo oria ogwu na-akwalite idi ire na ohuru. Yin agbatịri ya na-eme ka ọ bụrụ freeint.
Mpempe mgbochi Anti-Static (ESD) dị mma maka ndị ọrụ nka na-arụkarị ọrụ n'ime kọmputa ma ọ bụ na-ejikwa akụrụngwa na-emetụ ọnụ - semiconductor, mgbakọ kọmputa, PDP, LED, LCD, ekwentị ekwentị & mgbakọ PCB. Igwe ọ bụla nwere ike ịsa ahụ, na-eguzogide mmiri, mmiri na ọkụ ultraviolet maka ọtụtụ ojiji. Enwere ike itinye arụmọrụ Anti-Static (ESD) aka na aka niile na-eguzogide.
Sunnyglove ESD / Anti-static gloves
Ejiri usoro eji eme ka imi na-efe efe.
Magburu onwe ya dị mma site na owuwu echichi
10000 - 1000 nke klas dị ọcha
Obere aka ike gwụ ogologo oge na-eyi
Mbelata lint na uzuzu
Nwere ike ji dị ka uwe uwe
Washable na 40ºC ya na onye na-anọpụ iche
A ga-emegharị ya, enwere ike ịmebisị
Kwenye na CE EN 388: 2016, CE EN 420: 2003.
Ọ dị n ’oke nha.
Mpempe Anti-Static (ESD)
Nylon + ọla kọpa
Ntụpọ PVC wdg.
Eletrọniki, Eletri Ego Edere, Nchịkọta, Telefon, Semikọnụ, Anyanwụ, CD / DVD, omogbọ ala, Optics, Pharmaceutics, Ihe nkiri, Ugbo, ụlọ oriri na ọ Restauranụ ,ụ, Hotels wdg. Biko rịọ maka onyinye anyị pụrụ iche maka nnukwu ọnụ ọgụgụ.
Black Carbon Fiber PU Palm Glove
Number Ngwaahịa: 2305BP
Grey Nylon PU Finger Glove agwakọtara na eriri carbon
Number Ngwaahịa: 2305GF
Number Ngwaahịa: 2305BF